Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုးမော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
19 / 10 / 2021 19 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 209 Views စာ0မှတ်ချက် 2022, Ant-Man နှင့် Wasp: Quantumania, Black က Panther, အနက်ရောင် Panther II, ထာဝရက Black Panther Wakanda, နှောငျ့နှေး, နှောင့်နှေး, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego 2022, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, ရုပ်ရှင်တွေ, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, အဆိုပါ Marvels, Thor, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး
09 / 10 / 2021 09 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 257 Views စာ0မှတ်ချက် Batman, Black က Panther, ထာဝရက Black Panther Wakanda, Dc, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Marvel စတူဒီယို, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, အဆိုပါ Batman, Thor, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး, Wolverine
18 / 03 / 2021 18 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 1216 Views စာ0မှတ်ချက် Avengers, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Fortnite, Korg, Lego, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Miek, ကောလာဟလာ, Thor, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး, Thor: Ragnarok
11 / 12 / 2020 11 / 12 / 2020 ခရစ် Wharfe 867 Views စာ0မှတ်ချက် ပုရွက်ဆိတ်-Man, Ant-Man နှင့် Wasp: Quantumania, Black က Panther, အနက်ရောင် Panther II, ကပ္ပတိန် Marvel 2, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Fantastic Four, Lego, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ 2, Marvel, Marvel စတူဒီယို, ဒေါ်။ Marvel, အဆင့် 4, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး, ဗွီဒီယိုဂိမ်း
21 / 07 / 2019 21 / 07 / 2019 ဂရေဟမ် 1109 Views စာ0မှတ်ချက် Black ကမုဆိုးမ, ဓါးရွက်, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Fantastic Four, က Galaxy Vol ၏အုပ်ထိန်းသူများ။ 3, Lego, Lego Marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, Mutant, San Diego မှရုပ်ပြ Con 2019, San Diego မှရုပ်ပြ -con, SDCC, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, ထာဝရ, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး